एनआरएनएको अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी « Harekpal
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नयाँ नेतृत्वको लागि गरिएको निर्वाचनको मत गणना सकिएको छ । अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी भएका छन् । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी कुल आचार्यलाई पछि पार्दै पन्त एनआरएनएको अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् ।
पन्त अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी कुल आचार्यलाई १३५ मतले पछि पार्दै पन्त एनआरएनएको अध्यक्षमा विजयी भएका हुन्। उनले १०९४ मत प्राप्त गरे भने आचार्यले जम्मा ९५९ मत पाए।
महासचिवमा डा. हेमराज शर्माले जितेका छन् । त्यस्तै, सचिवमा गौरी जोशी, र आरके शर्मा विजयी भए । कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षमा क्रमशः महेश श्रेष्ठ र लोक दाहाल चयन भएका छन् । निर्वाचनमा २ हजार ३४० मत खसेको थियो ।
निर्वाचित पदाधिकारीको सूची
अध्यक्ष – कुमार पन्त
उपाध्यक्ष – बद्री केसी
उपाध्यक्ष – अर्जुन कुमार श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष – सोनम लामा
उपाध्यक्ष – मन केसी
उपाध्यक्ष – रविना थापा
महासचिव – डा. हेमराज शर्मा
सचिव- गौरी जोशी
सचिव – आरके शर्मा
कोषाध्यक्ष- महेश श्रेष्ठ
सह कोषाध्यक्ष- लोक दाहाल